Kooxda Manchester City ku dur durisay Kooxda Basel FC gurigeeda ee Champions League – Walaal24 Newss
Kooxda Manchester City ku dur durisay Kooxda Basel FC gurigeeda ee Champions League
February 14, 2018	0	By walaal24
Ilkay Gundogan ayaa dhaliyay labo gool halka Manchester City ay hal lug ka dhigtay wareega quarter-finalka Champions League iyagoo 4-0 kaga badiyay Basel.
Sergio Aguero ayaa dhaliyay goolkiisii ​​200aad ee City, halka Bernardo Silva uu sidoo kale shabaqa soo taabtay iyadoo kooxda Pep Guardiola ay marti galinayso habeenkii St Jakob-Park.
Inta badan dhaawaca ayaa la sameeyay iyadoo City ay seddex gool dhalisay sagaal daqiiqo gudaheeda qeybtii hore ee ciyaarta qeybtii hore, rajadii Basel ay ka dhalisay murugo weyn ka dib markii ay bilowday inay si wacan u bilowdo.
Gundogan ayaa goolka labaad u dhaliyey daqiiqadii ugu danbeysay laakiin hogaamiyeyaasha horyaalka Barclays Premier League ayaa marba marka ka dambeysa ku soo laabanaya, iyagoo fududeeyay tamarta keydka wadankooda.
Kevin De Bruyne ayaa laga saaray ciyaarta horaantii, Guardiola ayaa sidoo kale fududeeyay Leroy Sane oo bedel ku soo galay qeybtii danbe ee ciyaarta, ka dib markii uu si dhaqso ah uga soo kabsaday dhaawac canqowga ah.
Waqti dheer ma dhicin ka hor intaan City lagu xakameynin xakamaynta, inkasta oo ay ka badbaaday dhowr marxaladood oo hore.
Markii ugu horeysay ee Dimitri Oberlin ayaa difaacay daafaca markii uu kubad dheer ku ciyaarayay. Waxa uu heystey fursado ah sida Ederson uu u soo orday inuu isaga la kulmo, oo uu ku jiro isku daygiisa inuu soo jiito goolhayaha xiga, lakiin waxa uu beeniyay oo u ogolaaday Nicolas Otamendi inuu cadeeyo.
Otamendi iyo Oberlin ayaa mar kale ku lug lahaa weerarka Basel ee garoonka ku dhexjiray isagoo isku dayaya inuu garaaco xiddiga reer Argentine, laakiin garsoore Jonas Eriksson waxba ma uusan siin.
Magaaladu waxay ka dhigtay kuwa ugu badan ee ku riyaaqa inay awood u yeeshaan hogaanka taliska.
Gundogan, oo horey u tijaabiyay Tomas Vaclik markii uu bilowgii ahaa, wuxuu furay markii uu la kulmay geeska 14-daqiiqo De Bruyne oo leh madax kale oo adag oo ku yaal boostada dhow.
Goolka labaad ayaa si dhaqso ah u soo raacay, lakiin goolkii Raheem Sterling uu ka soo toogtay dhanka bidix ayaa waxaa laga saaray Bernardo Silva oo u ciyaara Leo Lacroix. Waqtiga iyo booska si uu isu dheelo, Portugal ayaa u ogolaanaya kubada inuu hoos u dhaco ka hor inta uusan ku dhufanin safar kala duwan oo ah Viola.
Kooxda martida ah ayaa haatan u muuqata mid ciriiri ah, waxaana ay u muuqdaan inay fiicnaanayaan sida Aguero uu u duulayo meel ka baxsan garoonka si uu u diiwaangaliyo goolkiisii ​​29aad ee xilli ciyaareedka ka dib markii uu qaniinay Fernandinho. Weeraryahanka heerka caalami ee dalka Argentine ayaa rigoore loo dhigay ka dib markii uu qaab ciyaareed kale oo qaali ah ku dhameystay ka dib markii uu afar gool ka dhaliyay Leicester dhamaadkii Isbuuca.
Taas ayaana u ogolaatay ragga Guardiola inay diirada saaraan kulankaan, lakiin De Bruyne ayaa wali ku soo laaban doona inta uu ku maqan yahay qeybtii hore.
Basel ayaa bilowday qeybtii labaad ee ciyaarta, iyadoo Mohamed Elyounoussi uu tijaabiyay Ederson meel fog waxaana Oberlin uu ku riixay jilibka isagoo wajahaya wajiga goolka, lakiin waxa ay ku sii jeedeen weerarka City.
Gundogan ayaa City horay u soo dhigay weerarka markii uu qalad ku galay daafaca islamarkaana ka toogtay goolka cajiibka ah ee ka baxsan Vaclik isaga oo ka yimid geeska.
Waa inuu dhameystiray seddexleey uu ka dhaliyay ka dib markii uu Aguero ku dhaliyey qeybtii dambe, laakiin Vacall ayaa badbaadiyay. Aguero ayaa la siiyay garsooraha weyn ee Guardiola madaama uu ka tagay garoonka ugu dhaqsaha badan.
Basel ayaa ku dagaalameysay, iyadoo Oberlin ay u weecatay ballaceeda Elyounoussi ee Ederson, laakiin kooxda heysata horyaalka Swiss ayaa si fiican u garaacday, waxaana ay ka careysiiyeen madaama ay cabsi galiyeen in ay ku kulmaan daqiiqado yar.
Kulankii xalay u dhaxeyay Juventus Vs Tottenham oo ku soo dhamaday bar bardhac
Kulanka hordhaca Porto Vs Liverpool waxyabaha aad ka helikarto ee Champions league
Xafiiska Hanti-dhowraha guud ee Qaranka oo ku wareejiyay qalab xafiisedyadii ay ku shaqeynayen Taliska Ciidanka Asluubta
Taliye ku xigenka Boliiska oo ka warbixisay Qaraxii ka dhacay Isgoyska Dabka ee Magaaladda Muqdisho
Guddoomiyaha Aqalka sare ee BFS oo Xariga ka jaray Dhismaha Xarunta Guddiga Madaxa banaan ee Hirgalinta Dastuurka
Wasaaradda Awqafta Soomaaliya oo heshiis iskaashi la sixiixatay Wasaaradda Awqafta Kuwait
Gudomiyaha Gobolka Banaadir oo kormeer ugu tagay Ciidamo cusub oo ka mid noqonaya Booliiska
Toogasho sababatay dhimasho oo ka dhacday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Dowladda Netherlands oo aqoonsatay Baasaboorada Diblomaasiga iyo kan Shaqaalaha
Mudaharaadayaasha Suudaan: oo dalbanaya in ladhiso dowlad rayid ah oo kumeel gaar ah
Baroordiiq loo sameynaayo dadkii lagu xasuuqay tuulada Sobane Da ee bartamaha dalka Mali
Daawo: Aadan Saransoor oo u jawaabay hadalkii ka soo yeeray Cabduwali Gaas
Daawo: Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay waxa wadooyinka loo xiray Xisbiga Wadajir borordiiq uu qabsan lahaa looga baajiyo
Daawo: Soomaalida degan Mareykanka oo caawinayaan Shaqaalaha Dowlada mushaar la’aanta ku dhacday
Daawo: War-murtiyeed ka soo baxay shirkii Amniga Qaranka oo ka socday magalada Beydhsbo laguna soo gaba gabeeyay